7 प्रश्नहरू तपाईंको एजेन्सीलाई सोध्नु अघि तपाईंले हस्ताक्षर गर्नु अघि | Martech Zone
Questions प्रश्नहरू तपाईंको एजेन्सीलाई सोध्नु अघि तपाईंले हस्ताक्षर गर्नु अघि
आइतवार, नोभेम्बर 23, 2014 आइतवार, नोभेम्बर 23, 2014 Douglas Karr
हामीलाई अन्य एजेन्सीहरूसँग काम गर्न मनपर्छ। खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन र सामग्री रणनीतिहरूमा हाम्रो विशेषज्ञता हाम्रो सबै एजेन्सी साझेदारहरूको लागि एक संसाधन भएको छ र हामी हाम्रो व्यवसायको त्यो भाग विकास गर्न जारी राख्छौं। हामी धेरै ठूलो विकास, डिजाईन र सार्वजनिक सम्बन्धका मानिसहरूसँग काम गर्छौं र हामी ती सबैसँग के समान छौं व्यापार परिणामहरूको खोजी।
व्यापार परिणाम बिना, तपाइँको एजेन्सी साधारण कुरा गर्दैन। रूपान्तरण गर्न सक्दैन कि एक अनुकूलित साइट बेकार छ। फेला पार्न नसकिने सुन्दर साइट बेकार हो। अनुसन्धान, डिजाईन र लेखनको लागि तपाईले धेरै शुल्क तिर्नुहोस् जुन तपाई पुन: निर्माण गर्न सक्नुहुन्न बेकार छ (प्रारम्भिक प्रकाशन भन्दा बाहिर)।
हामी निरन्तर ग्राहकहरु को संख्यामा छक्क पर्छौं जुन हामी आउँदछौं जसले वास्तवमै उनीहरूको सबै बजेट खर्च गरिसक्यो तर नतिजा साकार नै गरेन। हाम्रो लागि अपेक्षा भनेको जेसुकै रकम बाँकी रहेको छ र यसको साथ परिणामहरू प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु हो। कहिलेकाँही हामी यसलाई काम गर्न सक्दैनौं।
यसैले किन हाम्रो व्यापार मोडल उद्योगमा अलि अनौंठो छ। हामी फ्लैट शुल्क सगाई चार्ज गर्दछौं र परिणाममा कार्य गर्दछौं। हाम्रा धेरैजसो ग्राहकहरूले एकल कर्मचारीको लागत खर्च गरिरहेका छन्, तर हाम्रो टीम र हाम्रा सबै साझेदारहरू मापनयोग्य व्यापार परिणामहरू प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्न कार्य गरिरहेका छन्।
तपाईंले एजेन्सीसँग आफ्नो अर्को सम्झौता हस्ताक्षर गर्नु अघि, हामी तपाईंलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्न प्रोत्साहित गर्दछौं:
अरू कुन ग्राहकहरूले तपाईंको उद्योगमा काम गरेका छन्? तपाईंलाई लाग्न सक्छ कि म उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्वहरूको बारेमा सोध्दै छु, तर त्यो मात्र कारण छैन। हाम्रो एजेन्सी मार्केटिंग टेक्नोलोजी सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग अविश्वसनीय सफलताको लागि जारी छ तर हामी केही B2C उत्पादन कम्पनीहरूको साथ फ्लैट गिर्यौं। त्यस कारणका लागि, हामी एक खण्डमा केन्द्रित छौं र जो कोही पनि जोसँग हामीसँग त्यस सेगमेन्ट बाहिर काम गर्न चाहन्छ तिनीहरूलाई राम्रोसँग सूचित गरिएको छ ताकि हामी उनीहरूको अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकौं।
स्रोत फाइलहरूको स्वामित्व कससँग छ? यो प्राय जसो सबैभन्दा ठूलो समस्या हामीमा परिणत हुन्छौं। एजेन्सीले तपाईंलाई जे चाहिन्छ डिजाइन गर्दछ तर तिनीहरू स्वामित्व र सबै स्रोत फाईलहरूको नियन्त्रण कायम गर्दछ। के तपाइँ काम पुन: निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईंले एजेन्सीलाई सोध्नु पर्छ। के तपाईं एजेन्सी छोड्न चाहनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईंले फेरि फेरी सुरु गर्नुपर्नेछ। धेरै निराश तपाईको ग्राहकलाई बन्धक राख्नु भनेको तपाईको व्यवसाय कसरी बढाउनु हो भनेर होईन।
के हुन्छ जब यो काम गर्दैन? प्रत्येक एजेन्सीले उनीहरूले गरेको महान कार्यको प्रचार गर्दछ तर उनीहरू प्रायः असफलतासँग कुरा गर्दैनन्। हामी पनि हाम्रो हिस्सा थियो। प्रश्न के हुन्छ के हुन्छ। यदि तपाईं रिटेनरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले हालको एजेन्सी वा तपाईंलाई आवश्यक परेको चीज प्राप्त गर्न नयाँको साथ फेरि सबै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। हामी फ्ल्याट शुल्क काम गर्छौं ताकि हामीमाथि डेलिभर गर्न दबाव आउँछ। र सबैभन्दा नराम्रो अवस्थामा, हाम्रा ग्राहकहरूले जान्दछन् कि उनीहरूले हस्ताक्षर गर्नु अघि हामी कसरी हाम्रो संलग्नताहरू समाप्त गर्दछौं (हामी रणनीति, रिपोर्टि,, कागजात, र सम्पत्तिहरूको पूर्ण कारोबार गर्छौं)।
के समावेश गरिएको छ, अतिरिक्त के हो? कति कम्पनीहरूले साइटहरू वा रणनीतिहरू सुरू गर्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन मात्र खोजिएको हो कि परियोजना खोज वा मोबाइलको लागि अनुकूलित छैन। जब चुनौती दिईन्छ, एजेन्सी जवाफ दिन्छ, "तपाईंले त्यो माग्नुभएन।" हु? के तपाई गम्भीर हुनुहुन्छ? यदि तपाइँको एजेन्सी तपाइँको ग्राहकहरु को लागी हेरिरहेको छ, तपाइँ व्यापार परिणाम अधिकतम गर्न केहि गर्न मा जिद्दी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
हामी कसरी स्वामित्व प्रबन्ध गर्ने? यो ठीक छ यदि तपाईंसँग डोमेन खरीद गर्ने एजेन्सी छ, होस्टिंग, थिमहरू, वा स्टक फोटोग्राफी… तर कसको उनीहरूको स्वामित्व छ? त्यहाँ एक एजेन्सी भन्दा बढि खराब अरू छैन जुन तपाईको डोमेनसँग जवाफदेही हुँदैछ र हिंड्दै छ (हो, यो अझै हुन्छ)। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग इस्त्रीक्लाड सम्झौता छ कि कुनै पनि स्वामित्व तपाईंको हो। यसैले हामी प्राय जसो हाम्रो ग्राहकहरूबाट क्रेडिट कार्ड पाउँछौं र उनीहरूको नाममा सेवाहरू खरीद गर्दछौं। तपाईको एजेन्सी थप्न / हटाउन सक्ने सामूहिक ईमेल ठेगानाहरू पाउनु भनेको ती खाताहरू प्रबन्ध गर्न उत्तम तरिका हो जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई कहिले पनि हराउनुहुन्न।
तिनीहरूले कुन उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेका छन्? जहाँसम्म हामीले निजी रूपमा हाम्रा ग्राहकहरूको लागि केहि प्लेटफर्महरू सेतो लेबल गर्यौं, हामी अझै खुला र इमान्दार छौं हामीले प्रयोग गरिरहेको उपकरणहरूमा। एजेन्सी हुनुको फाइदा यो हो कि हामी सफ्टवेयरमा उद्यम इजाजतपत्र खरीद गर्न सक्छौं जुन हामी धेरै ग्राहकहरूको लागि प्रयोग गर्छौं। एक्लो, हाम्रो ग्राहकहरु लाई वहन गर्न को लागी सक्षम छैन तर सामूहिक रूपमा हामी उनीहरुलाई पहुँच प्रदान गर्न सक्छौं। यसले केवल हाम्रा ग्राहकहरूलाई हामीले ल्याउने मूल्यको समझ मात्र प्रदान गर्दैन, यसले उनीहरू आफैंका लागि हामीले प्रयोग गरिरहेको उपकरणहरूको गुणस्तर र प्रतिष्ठा पनि देखाउँदछ।
तिनीहरूले अरू कसरी मद्दत गर्न सक्छन्? ठीक - म अहिले सम्म नकरात्मक भएको छु त्यसैले सकारात्मक पाउनुहोस्। तपाईं कहिलेकाँही एजेन्सीको बेल्ट अन्तर्गत प्रतिभा र परियोजनाहरूको फराकिलामा चकित हुनुहुनेछ। यो हाम्रो आफ्नै गल्ती हो, तर कहिलेकाँही हामी फेला पार्दछौं कि हाम्रो अवस्थित ग्राहकले कामको लागि अर्को संसाधन भाडामा लियो जुन हामीले उनीहरूका लागि पूरा गर्न सक्थ्यौं। त्यहाँ निराशाजनक केहि छैन! निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो एजेन्सीहरूसँग राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ जुन उनीहरू पूरा भइरहेका छन् र केहि अन्य फोकसका क्षेत्रहरूमा उनीहरूसँग विशेषज्ञता छ। तपाईंसँग पहिल्यै सम्बन्ध भएकोले अन्य सेवाहरू र प्रोजेक्टहरूमा थप्न नयाँ स्रोतको साथ ताजा सुरू गर्नु भन्दा सजिलो हुन्छ।
हामीले कहिलेकाँही कहिलेकाहिं पनी हास्यास्पद इन्फोग्राफिक साझेदारी गर्थ्यौं अपमानजनक ग्राहक सम्बन्धहरू त्यो एजेन्सीहरू भित्र जान्छन्। तर दुरूपयोग कुनै पनि सम्बन्धको दुबै छेउमा हुन सक्छ र यो अत्यावश्यक छ कि तपाईं आफ्नो एजेन्सी द्वारा दुर्व्यवहार नहुनुहोस्। तपाईका रणनीतिहरूले मात्र दु: ख भोग्न सक्दछन्, तर तपाईले आफ्नो बजेट पनि गुमाउन सक्नुहुन्छ।
मलाई लाग्छ यी सबै एकै प्रश्नमा जोड दिन सकिन्छ। के तपाईको एजेन्सीले तपाईको ब्यापार परिणाम वा तिनीहरूको सुनिश्चित गर्न काम गरिरहेको छ? हामी विश्वास गर्दछौं जब हाम्रो ग्राहकहरु लाई फाइदा हुन्छ, त्यसैले हामी ... त्यसैले सधैं हाम्रो प्राथमिकता हो।
टैग: एजेन्सीएजेन्सी समस्याहरुएजेन्सी प्रश्नहरूएजेन्सी सम्बन्ध
पुनर्गठन, पुन: लेख्नुहोस् र सामग्री रिटायर गर्नुहोस्
भिडियो: आधा घण्टामा तपाईंको ईकमर्स स्टोर सुरु गर्नुहोस्
त्यसोभए यो बिहान २ बजे थैंक्सगिभिङ हो र होईन मैले प्रार्थनामा गरे तापनि म आभारी छु सबैलाई इमेल गर्न रात बिताएको छैन। म अझै पनि 2-व्यक्ति गिरोहको रूपमा एउटा वेबसाइटको साथ गैर-नाफामुखी निर्माण गरिरहेको इमेल सफा गर्दैछु आशा छ कि यो नयाँ वर्षको सुरुमा सुरु भयो। डगलाई मेरो टिप्पणी यहाँ सार्वजनिक धन्यवाद हो, उहाँको हालको पोष्टले निष्ठा, आचार संहिता र पारदर्शितालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ जसमा म पहिलो पटक धेरै वर्ष आकर्षित भएँ जब हामी दुबैले Facebook को उदय हुनु अघि "सानो इन्डियाना" लाई सक्रिय रूपमा समर्थन गरेका थियौं। जबरजस्ती प्रारम्भिक सेवानिवृत्ति र हृदयघातबाट रिकभरीले मलाई भगवानसँगको मेरो अन्तिम अध्यायमा पुर्यायो, मेरो 1 पाउन्ड सेवानिवृत्त हाभानीज ब्रीडर सोलमेट, सामाजिक सुरक्षा र मेरो पिकअप भन्दा बढी माइलेज भएको कम्प्युटर। म प्रख्यात बेवकूफ हुँ तर चाँडै नै eBay नयाँ क्यारियर हुनेछैन भनेर सिकें तर जीवनका अनुभवहरूले मलाई eCommerce को लागि मन परायो, जस्तै फेरि एक च्याम्बर अफ कमर्सको नेतृत्व गर्दै र व्यवसाय मालिकहरूसँग काम गर्ने तर स्वतन्त्र रूपमा स्वामित्वमा रहेको र इन्डियानामा मात्र सीमित। जसरी मेरो प्रोजेक्ट एक जोश बन्यो, मेरो मनपर्ने र सम्मान भयो Douglas Karr उसको सामाजिक सञ्जाल पोस्टिंगहरू साथै उसको ब्लगहरू मार्फत। उसलाई थाहा छैन कसरी उसको व्यावसायिक विशेषज्ञता डग व्यक्तिको रूपमा उसको लागि बलियो आकर्षित थिएन। विडम्बनाको कुरा कि एक पूर्ण कम्प्यूटर बेवकूफले एक कुशल र प्रशंसित गीकरसँग यस्तो सम्बन्ध फेला पार्छ, तपाईले प्रायः आजीवन साथी र सल्लाहकार भएको महसुस गर्नुहुन्छ जबकि आमनेसामने कुराको अनुभूति गर्दा यी वर्षहरूमा दुई पटक मात्र भएको छ। हो, म उसलाई आफ्नो ब्लगहरू र सोशल मिडिया व्यक्तित्वको साथ अनलाइन कसरी फेला पार्छु भनेर उहाँ शरीरमा हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँलाई धेरै पटक हेर्दा उहाँ वास्तवमै वास्तविक सम्झौता हुनुहुन्छ भनेर आश्वस्त महसुस गर्न आवश्यक छैन। हामी धेरै लाइक र मन नपर्ने साझा गर्छौं तर कहिलेकाहीं खुलेर असहमत छौं; (याद गर्नुहोस् कि म ज्ञान बिना कम्प्यूटर मालिक हुँ त्यसैले यो एक उचित ब्यारोमिटर होइन,) तर हाम्रो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक दृष्टिकोण प्रायः नजिकको पङ्क्तिबद्ध छ र उनको व्यावसायिक राय र मार्गदर्शन स्वीकार गर्न को लागी ट्रस्ट बनाउँछ। यो थ्याङ्क्सगिभिङ हो र ब्लग भित्रको यो पारदर्शिता देखेर मलाई तपाइँ र तपाइँको लागि व्यक्तिगत धन्यवादको एक स्लिभर साझा गर्न ल्याउँछ।